नेपालमा दिनँहुजसो बालिका वलात्कारका घटना भैरहेका छन् । प्रहरी, डाक्टर, शिक्षक, ड्राइभर, नेता, व्यापारी, कर्मचारी देखि गोठालासम्मले वलात्कार गरेका खबर आइरहेका हुन्छन् । नागरिकका रक्षक नै वलात्कारी भैरहेको बेला हामीले कस्लाई विश्वास गर्ने । वलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा त्यस्तै कडा सजाएको कानुन बनेमा मात्रै हाम्रा दिदी बहि...
महिलाले सुरक्षा नपाए त जाने ठाँउ नै छैन । यहाँ बलात्कारीलाई होइन पीडितलाई सजाय हुन्छ । जसो गरे पनि महिलाको नै दोष देखाइन्छ । केहि पुरुषलाई महिला देख्नै हुन्न, एक बर्षकी बालिका समेत बलात्कार गर्छन् । कलि युग यस्तै रहेछ । खै कसलाई के भन्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन गगन थापा ज्यु ले भन्नु भएको थियो । हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमीकामा रहने छौ भनेर, के यहि हो रचनात्मक प्रतिपक्षीको भुमीका ? कस्तो संस्कार बसेको हाम्रो देशमा प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै सडक आन्दोलन अनि विरोध मात्रै गर्नु पर्ने । काङग्रेसलाई मेरो सुझाब छ, देश र नागरिकलाई...
सहरिया कामकाजी महिलाहरुले बच्चालाई स्तनपान गराएको देखिँदैन । यो उनीहरुको बाध्यता हो वा रहर । बच्चा जन्मना साथ पाउडर दूध खुवाउने चलन बढ्दैछ तर आमा र बच्चाको सम्बन्धमा तेतिबेला मिठास आउँछ, जुनबेला आमाले स्तनपान गराउँछिन् । जन्मेदेखि एक बर्षसम्म नियमित आमाको दुध चुस्ने बच्चा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छन् जन्मेपछ...
युद्ध चलिरहेको समयमा समेत पक्ष बिपक्षका घाईते बिरामीको उपचार रोकिदैन । डा.केसीका माग सही छन् तर सर्मथनको बाहानामा अस्पतालका सेवा बन्द गर्दै बिरामीको उपचार गर्दिन भन्नु राम्रो होइन ।